मेडिकल शिक्षामा सुधारको संकेत : योग्यता सूची र तोकिएकै शुल्कमा धमाधम भर्ना
काठमाडौं, ३० पुस । गत वर्षसम्म एमबीबीएसको तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएको गुनासो चौतर्फी आएको थियो । मेरिटका आधारमा भन्दा जसले बढी शुल्क बुझाउन सक्छ, उसैले भर्ना पाउँथ्यो ।
यस्तामा न्यून अंक हुने र पैसा हुनेलाई कलेजले सिधै भर्ना लिन्थ्यो । डा. गोविन्द केसीले मेरिटका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने माग हरेक अनशनमा राखे । कार्यान्वयन जटिल थियो ।
डा. जगदीश अग्रवालको नयाँ ‘टिम’ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) प्रवेश गरेपछि मेरिट र तोकिएकै शुल्कमा भर्ना गर्ने व्यवस्थामा कडीकडाउ गरे । यही व्यवस्थाअनुसार धमाधम भर्ना भइरहेको छ । आईओएमले लिएको प्रवेश परीक्षामा जसको धेरै अंक छ, उसलाई क्रमश: बोलाएर काउन्सिलिङ गरेर कलेज रोजाइन्छ । निश्चित दिनभित्र भर्ना गरिसक्नुपर्ने, सरकारले तोकेको शुल्कको ५० प्रतिशत कलेजको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । शुल्क बुझाएको रसिदसहित अनलाइनमार्फत भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयमै भर्ना भएपछि विद्यार्थीको नाम सूची कलेजमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विद्यार्थीलाई कलेजले बार्गेनिङ गरेर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाको लगभग अन्त्य हुँदै छ । यो व्यवस्था एमबीबीएसबाहेक अरू कार्यक्रममा लागू भइसक्यो । यसअनुसार विद्यार्थी छनोट गरी पुस १३ देखि पढाइ सुरु भइसक्यो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
मेडिकल कलेजहरूले यसअघि सम्बन्धन नवीकरणसमेत नगरी सञ्चालन गरिरहेका थिए । सम्बन्धन प्राप्त कलेजको आफ्नो सम्बन्धन नवीकरण हरेक दुई वर्षमा विश्वविद्यालयबाट गराउनुपर्छ । आईओएम स्रोतका अनुसार पछिल्लो वर्ष त्रिविको सम्बन्धन नवीकरण शुल्क मात्रै मेडिकल कलेजहरूले ६ करोड बुझाइसके । त्यस्तै, आईओएमलाई बुझाउनुपर्ने संस्थागत शुल्क ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएका छन् । आईओएमको विद्या परिषदको २२ असोजको १९० औं बैठकले वर्षौंदेखि बुझाउन बाँकी रकम नबुझाउने कलेजको सिट निर्धारण नगर्ने चेतावनी दिएपछि कलेज सञ्चालकहरूले धमाधम रकम बुझाएका हुन् । एउटै कलेजले तीन करोड रुपैयाँसम्म बुझाएका छन् ।
स्नातकोत्तर (पीजी) गर्न एक करोड रुपैयाँ लिने कलेजलाई समेत अग्रवालको टिमले ३१ लाखमा सीमित गरेको छ । पीजीमा मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्न बाध्य बनाइएको छ । आईओएमले सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई आर्थिक र प्राज्ञिक अनुशासनमा राख्नसमेत बाध्य पारेको छ । सिट निर्धारण गर्दा भौतिक, जनशक्तिलगायतको मापदण्डबाहेक कलेजलाई अनुशासनमा राख्न थप ४ वटा मापदण्ड लागू गरिएको छ ।
सिट निर्धारण गर्दा अपनाइने मूल्यांकनको सय नम्बरमा १० नम्बर ४ वटा मापदण्डमा कायम गरिएको छ । त्यसमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई तिर्न बाँकी बक्यौता नहुँदा २.५, सरकारले तोकेको शुल्कमा अध्ययन गराउँदा २.५, पठनपाठन अवरुद्ध नहुँदा २.५ र कलेजको बारेमा गुनासो नहुँदा २.५ अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सिट निर्धारण हुने भएपछि कलेजले तोकिएकै शुल्कमा पढाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सिर्जना भएको छ । गत वर्ष तोकिएकै शुल्कमा नपढाएका आधारमा शतप्रतिशत सिट नपाउने कलेज पनि छन् । सबै मापदण्ड पूरा गरे पनि चारवटा आधार पूरा नगर्दा यस वर्ष गण्डकी, नेसनल, चितवन मेडिकल कलेजको १०/१० सिट घटेको छ ।
आईओएमको सहायक डिन नियुक्त गर्नसमेत मापदण्ड बनाइएको छ । छनोट समितिले तय गरेको मापदण्ड पूरा गरेका ४ जना डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त भइसकेका छन् । तीमध्ये एक जनाले राजीनामा दिएकाले उक्त पद रिक्त छ । त्यस्तै, महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसमा डेन्टलको समेत पढाइ सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
‘सुधार प्रयास जारी राखेका छौं,’ डिन डा. अग्रवालले भने, ‘मेरिटका आधारमा तोकिएकै शुल्कमा भर्ना गर्दा स्टेक होल्डरलाई मन नपरेको हुन सक्छ । पहिला आफूखुसी चलेको थियो । अब चलेखलसमेत बन्द भयो ।’
यस कारण कैदीबन्दीहरुको सजाय मिनाह भएन यसपाली
महिला प्रहरीमाथि बलात्कारको प्रयास,पक्राउ परे जवान
यसरी आयो सेनामा नयाँ राजनितिक बहस
प्रथम राष्ट्रव्यापी महिला तथा पुरुष नोबिज बक्सिङ प्रतियोगिता हुने
कर्णाली नदीमा डुंगा पल्टिँदा दुईजना बेपत्ता
कता गयो अनुगमन ? भाडा रेट ६ सय तिर्नुपर्ने १ हजार !
दशैँमा घर र डेरा छाेडेर जानेले प्रहरीलार्इ खबर गर्नुहाेस् : प्रहरी
उखुको नगद अनुदान बैंकबाट
कांग्रेसका नेताले उठाए वृद्धभत्ताको कुरो,' पाँच हजार कता पुग्यो ?'